Hadron Collider: सुरु गर्नुहोस्। ठूलो Hadron Collider किन? कहाँ छ?
ठूलो Hadron Collider थप 2007 देखि सुरु रूपमा हामी आज थाहा जो त्वरक, को इतिहास। सुरुमा यो cyclotron को त्वरक को कालक्रम साथ सुरु। उपकरण एउटा सानो उपकरण तालिका मा सजिलै फिट थियो। त्यसपछि गतिवर्धकपरिवर्तनगरियो को कथा निरंतर विकास भएको छ। यो synchrotron र synchrotron देखियो।
सायद सबैभन्दा मनोरंजक को इतिहास मा 1956 देखि 1957 साल अवधि थियो। समयमा, सोभियत विज्ञान, विशेष भौतिक, विदेशी भाइहरूलाई पछि LAG थिएन। अनुभव को संचित वर्ष प्रयोग गरेर व्लादिमीर Veksler नाम सोभियत भौतिक मा विज्ञान एक सफलता गरे। तिनीहरूले समयमा सबैभन्दा शक्तिशाली synchrotron सिर्जना भएको थियो। यसको काम क्षमता 10 GeV (10 अर्ब इलेक्ट्रन वोल्ट) थियो। ठूलो इलेक्ट्रोन-पोजीट्रान Collider, एक त्वरक स्विस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका: पछि यो खोज पहिले नै गतिवर्धकपरिवर्तनगरियो को गम्भीर उदाहरण सिर्जना गरेको छ। quarks को मौलिक कण को अध्ययन - तिनीहरू सबै एक साधारण लक्ष्य छ।
ठूलो Hadron Collider इटालियन भौतिक को प्रयासमा पहिलो स्थान धन्यवाद सिर्जना भएको थियो। र आफ्नो नाम कार्लो Rubbia, नोबेल पुरस्कार विजेता थिए। यसको गतिविधि समयमा Rubbia आणविक अनुसन्धान लागि युरोपेली संगठन मा एक निर्देशक रूपमा काम गरे। यसलाई निर्माण र LHC मा-साइट अनुसन्धान केन्द्र हो चलान निर्णय भएको थियो।
जहाँ Hadron Collider?
Collider स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स बीच सीमाना मा राखिएको। यसको परिधि को लम्बाइ 27 किलोमिटर छ, र त यो ठूलो भनिन्छ। त्वरक घन्टी फिर्ता 50 175 गर्न मीटर जान्छ। चुम्बक 1232 collider सेट गरिएको छ। तिनीहरूले जो एक यस्तो चुम्बक को ऊर्जा लागत वस्तुतः अनुपस्थित भएकोले, प्रवेग लागि अधिकतम क्षेत्र विकास गर्न सक्छन् हो, superconducting छन्। प्रत्येक चुम्बक को कुल वजन 14.3 मीटर को एक लम्बाइ मा 3.5 टन छ।
कुनै पनि शारीरिक वस्तु जस्तै, ठूलो Hadron Collider गर्मी उत्पन्न गर्छ। त्यसैले, यो निरन्तर सुन्दर गर्न आवश्यक छ। यो उद्देश्य लागि, तापमान तरल नाइट्रोजन को 12 लाख लिटर प्रयोग 1.7 K मा बनाए छ। जो दस पटक कम सामान्य वायुमण्डलीय दबाव भन्दा, दबाब प्रयोग गरिन्छ - साथै, तरल हेलियम (7,00,000 लिटर) ठंडा लागि प्रयोग गरिन्छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण।
तापमान 1.7 K centigrade -271 डिग्री छ। यस्तो तापमान गर्न लगभग नजिक छ निरपेक्ष शून्य। निरपेक्ष शून्य भौतिक शरीर हुन सक्छ जो सबै भन्दा कम सम्भव सीमा, भनिन्छ।
सुरुङ को भित्री भाग रोचक छैन कम छ। त्यहाँ सम्भावनाहरू संग निओबियम-टाइटेनियम superconducting केबल छन्। आफ्नो लम्बाइ 7600 किलोमिटर छ। कुल वजन 1,200 टन केबल छ। केबल को भित्री - 1.5 अर्ब किलोमिटर कुल दूरी संग तार 6300 को एक प्रतान। यो लम्बाइ 10 Astronomical एकाइहरु बराबर छ। उदाहरणका लागि, सूर्य गर्न पृथ्वीबाट दूरी 10 यस्तो एकाइहरु छ।
स्विस पक्ष संग - हामी यसको भौगोलिक स्थान कुरा भने, यो collider छल्ले सेन्ट-Genís र Forno VOLTAIRE फ्रान्सेली पक्षमा स्थित, साथै मारिन र Vessurat को शहर बीच झूठ बताए गर्न सकिन्छ। सानो घन्टी, भज भनिन्छ, को व्यास को सीमाना साथ विस्तार।
यस प्रश्नको जवाफ गर्न "को LHC के हो", तपाईं वैज्ञानिकहरू बारी गर्न आवश्यक छ। धेरै वैज्ञानिकहरू बस अर्थमा बनाउन गर्दैन यसलाई विज्ञान को अस्तित्व को सम्पूर्ण अवधि लागि ठूलो आविष्कार र आज हामीलाई थाह छ, जो यो बिना त्यो विज्ञान, छ भनेर भन्न। अस्तित्व र ठूलो Hadron Collider को सुरूवात रोचक छन् LHC मा कणहरु को टकराव एक विस्फोट हुन्छ। सबै ठीक कणहरु फरक दिशामा छरिनु। धेरै अस्तित्व र अर्थ व्याख्या गर्न सक्छ नयाँ कण, गठन गर्ने।
वैज्ञानिकहरू यी कणहरु फेला पार्न प्रयास गरेका छन् कि पहिलो कुरा दुर्घटनाग्रस्त - यो सैद्धांतिक बुलाया भौतिक पत्रुस Higgs प्राथमिक कण द्वारा भविष्यवाणी छ "Higgs boson"। यो आश्चर्यजनक कण जानकारी एक वाहक छ, मानिन्छ। अझै यो एक "कण परमेश्वरले" भनिन्छ। खोल्ने वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डको बुझ्न सार्न थियो। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ 2012 मा,4जुलाई, Hadron Collider (यसलाई आंशिक सुरु सफल) एक यस्तै कण फेला पार्न मद्दत गर्न। मिति, वैज्ञानिकहरूले विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
कसरी लामो इच्छा ...
को पाठ्यक्रम, प्रश्न तुरुन्तै खडा, किन वैज्ञानिकहरू त्यसैले यी कणहरु अध्ययन गर्न लामो छन्। तपाईं उपकरण छ भने, तपाईँले यसलाई चलाउन सक्छ, र हरेक समय थप र थप डाटा गोली। यो एक महंगा खुशी हो - LHC काम भन्ने तथ्यलाई। एक सुरूवात एक ठूलो राशि लागत। उदाहरणका लागि, वार्षिक ऊर्जा खपत गर्न 800 मिलियन। किलोवाट / घन्टा बराबर छ। ऊर्जा यो रकम औसत स्तर मा, 100 हजार। मानिसको जनसंख्या संग शहर खपत। यो मर्मतका खर्च समावेश छैन। कम्प्युटर-पठनीय जानकारी प्रक्रिया धेरै समय लाग्छ भनेर: - अर्को कारण डाटा को एक ठूलो मात्रा उत्पादन गर्न बाध्य भएको प्रोटन pitting गर्दा हुन्छ कि LHC विस्फोट छ। पनि वास्तवमा बावजुद कि पनि ठूलो आज स्तरअनुसार, जानकारी प्राप्त कम्प्युटर शक्ति।
अर्को कारण - यो कुनै कम प्रसिद्ध छ गाढा कुरा। यो दिशा मा collider काम वैज्ञानिकहरू, ब्रह्माण्डको को देखिने दायरा मात्र 4% छ कि आश्वासन दिए। यो बाँकी छ कि कल्पित छ - यो गाढा कुरा र गाढा ऊर्जा छ। Experimentally यो सिद्धान्त सही हो भनेर प्रमाणित गर्ने प्रयास।
Hadron Collider: लागि वा विरुद्ध
को LHC अस्तित्व को सुरक्षा प्रश्न मा भनिन्छ गाढा कुरा को सिद्धान्त अगाडि राखे। प्रश्न उठ्दा: "Hadron Collider: लागि वा विरुद्ध?" उहाँले धेरै वैज्ञानिकहरू चिन्तित थियो। संसारको सबै महान मन दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। "विरोधीहरूले" यदि यस्तो कुरा अवस्थित, त्यसपछि यसलाई यसको विपरीत कण हुनुपर्छ भन्ने एउटा रोचक सिद्धान्त अगाडि राख्नु छ। र त्वरक मा कणहरु को टकराव गाढा भाग देखिन्छ। त्यहाँ एक जोखिम थियो गाढा भाग र हामी अनुहार हेर्न कि भाग छ। त्यसपछि यो ब्रह्माण्ड को मृत्यु नेतृत्व गर्न सक्छ। तर, पहिलो सुरु LHC पछि यो सिद्धान्त आंशिक भाँचिएको छ।
जन्म - महत्त्व अर्को ब्रह्माण्डको एक विस्फोट, वा बरु आउँछ। यो ब्रह्माण्ड अस्तित्वको पहिलो सेकेन्डमा गऱ्यौ कसरी टकराव अवलोकन गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास छ। बाटो त्यो बिग बैंग को मूल पछि देख्यो। यो कण टकराव प्रक्रिया ब्रह्माण्डको को जन्म सुरुमा थियो कि एक धेरै समान छ भन्ने विश्वास छ।
कम से कम अर्को शानदार विचार वैज्ञानिकहरू जाँच जसमा - यो विदेशी मोडेल हो। यो अविश्वसनीय देखिन्छ, तर त्यहाँ जो हामीलाई मानिसजातिले जस्तै अन्य आयाम र universes छन् कि सुझाव एक सिद्धान्त छ। र oddly पर्याप्त, त्वरक र मदत गर्न सक्षम छन्।
बस राख्नु, को त्वरक को अस्तित्व को उद्देश्य ब्रह्माण्डको छ के प्रमाणित वा कणहरु र सम्बन्धित घटना कुनै पनि अवस्थित सिद्धान्त खण्डन गर्नु, यो सिर्जना गरिएको थियो कसरी, बुझ्न छ। निस्सन्देह, यो वर्ष लाग्न, तर प्रत्येक सुरु, विज्ञान को दुनिया पल्टाइदिनुभयो नयाँ आविष्कारहरू संग थियो।
को त्वरक हैं
सबैले त्वरक कणहरु प्रकाश को गति 99% सम्म accelerates थाह, तर धेरै मानिसहरू प्रतिशत को 99,9999991% बराबर हो भनेर थाहा छैन प्रकाश को गति। यो अचम्मको आंकडा किनभने सही डिजाइन को अर्थमा बनाउँछ र शक्तिशाली चुम्बक बढाउने। हामी पनि कम ज्ञात तथ्य केही ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ।
प्रवेग समयमा कणहरु को टकराव उत्पादन नम्बर
एक गुच्छा मा प्रोटन को संख्या 100 Bln गर्न। (1011)
bunches संख्या 2.808 गर्न
प्रोटन पारित को नम्बर डिटेक्टर क्षेत्रमा बीम
अप गर्न करोड 31। दोस्रो क्षेत्र 4
चौराहे मा कण टक्कर संख्या
ठक्कर डाटा प्रति मात्रा बारेमा 1.5 MB
कणहरु Higgs को मात्रा 1 बिट हरेक 2.5 सेकेन्ड (बीम को पूर्ण तीव्रता मा र अनुसार कणहरु Higgs को गुण बारे केही अनुमानको संग)
सेकेन्ड को एक मामला मा डाटा को लगभग 100 मिलियन। प्रवाहको दुई मुख्य डिटेक्टरों हरेक आउने 1,00,000 भन्दा धेरै सीडी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। बस एक महिना मा डिस्क को संख्या तिनीहरूले थाक मा पल्टिने गर्दा, यो चन्द्र पर्याप्त हुनेछ कि यस्तो उचाइ पुग्नुभएको छ। यो यसैले डिटेक्टरों आउन सबै डाटा सङ्कलन गर्न निर्णय भएको थियो, तर ती केवल डाटा संग्रह प्रणाली, वास्तवमा मा डाटा को लागि एक फिल्टर रूपमा कार्य जो प्रयोग गर्न अनुमति गर्ने। यो विस्फोट को समयमा भयो कि मात्र 100 घटनाहरू रेकर्ड गर्न निर्णय भएको थियो। यी घटनाहरू लिपिबद्ध LHC सिस्टम पनि त्वरक स्थितिको स्थान हो जसले कण भौतिकी, लागि युरोपेली प्रयोगशाला मा स्थित छ जो को डाटा केन्द्र सङ्ग्रह गर्न हुनेछ। रेकर्ड गरिएको छ कि घटना, र वैज्ञानिक समुदाय सबैभन्दा ठूलो चासो प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई रेकर्ड गरिनेछ।
प्रशोधन गर्न डाटा एक सय किलोबाइट्स रेकर्ड पछि। यो उद्देश्य लागि, CERN स्थित दुई लाख भन्दा बढी कम्प्युटर। यी कम्प्युटर उद्देश्य कच्चा डेटा को प्रक्रिया र थप विश्लेषण लागि उपयोगी हुने उनको आधार को गठन छ। थप उत्पन्न डाटा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिनेछ कम्प्युटरमा नेटवर्क ग्रिड। यो अनलाइन नेटवर्क संसारभरि विभिन्न निकायहरुमा स्थित छन् कम्प्युटर हजारौं जडान, अधिक एक सय प्रमुख केन्द्र, तीन महादेशमा मा अवस्थित छ जो बांध। अधिकतम डाटा दर लागि - सबै त्यस्ता अंक अप्टिकल फाइबर प्रयोग CERN जोडिएको छन्।
तथ्य कुरा, यो शारीरिक संकेतक को संरचना बारे पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ। टनेल त्वरक तेर्सो विमान देखि 1.4% को एक विचलन छ। यो अखंड रक मा त्वरक टनेल अधिकांश राख्न पहिलो स्थानमा गरेको थियो। यसरी विपरीत पक्ष मा नियुक्ति को गहिराई भिन्न छन्। हामी जेनेभा नजिक स्थित छ जो ताल देखि मान भने, गहिराई 50 मिटर छ। विपरीत भाग 175 मिटर गहिराइमा छ।
यो रोचक कुरा चंद्र चरणहरु को त्वरक असर छ। यसलाई टाढा वस्तु जस्तै देखिन्छ सक्छ एक दूरी मा कार्य गर्न सक्छ। तर यो उल्लेख गरेको छ कि त्यहाँ जेनेभा क्षेत्रमा भूमि को एक ज्वार, हुँदा धेरै 25 को रूपमा सेन्टिमिटर द्वारा बढ्दो पूर्ण चन्द्र, समयमा। यो collider को लम्बाइ असर गर्छ। लम्बाइ जसबाट 1 मिलिमिटर द्वारा वृद्धि र बीम ऊर्जा 0.02% परिवर्तन गरिएको छ। बीम नियन्त्रण ऊर्जा 0,002% सम्म आयोजित हुनुपर्छ भएकोले शोधकर्ताओं यो घटना खातामा लिनुपर्छ।
पनि रोचक धेरै छन् को रूप मा, collider टनेल एक सर्कल भन्दा एक अष्टभुज को आकार छ भन्ने छ। कोण छोटो खण्डहरू को गठन। तिनीहरूले निश्चित डिटेक्टरों र त्वरित कण बीम प्रबन्धन कि सिस्टम प्रबन्ध छन्।
Hadron Collider, विवरण को धेरै र वैज्ञानिकहरू को उत्तेजना संग सम्बन्धित छ सुरूवात जो - एउटा अचम्मको यन्त्र। सबै त्वरक दुई छल्ले हुन्छन्। सानो घन्टी संक्षिप्त प्रयोग गर्न प्रोटन synchrotron भनिन्छ वा, - भज। ठूलो घन्टी - सुपर प्रोटोन Synchrotron, वा एसपीएस। सँगै दुई छल्ले प्रकाश को गति अनुमति 99.9% गर्न फैलाने भाग। यसरी 16 पटक आफ्नो कुल ऊर्जा वृद्धि, बढ्छ र प्रोटन ऊर्जा collider। यो पनि कणहरु प्रत्येक अन्य लगभग 30 मिल। समय / s सँग ठोक्किनु अनुमति दिन्छ। 10 घण्टा को लागि।4प्रमुख डिटेक्टरों प्रति सेकेन्ड डिजिटल डाटा को सबै भन्दा 100 टेराबाइट्स मा प्राप्त भएको छ। व्यक्तिगत कारक कारण डाटा प्राप्त। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले नकारात्मक विद्युत शुल्क छ जो प्राथमिक कण, पत्ता लगाउन सक्छ, र आधा-स्पिन छ। यी कणहरु अस्थिर भएकोले, त्यसपछि आफ्नो खोज असम्भव मात्र आफ्नो ऊर्जा अक्ष बीम गर्न एक निश्चित कोण मा उत्सर्जित गर्न पत्ता लगाउन सम्भव छ निर्देशन दिन्छ। यो चरण पहिलो ट्रिगर स्तर भनिन्छ। यो कदमले 100 भन्दा बढी विशेष डाटा कार्ड, तर्क कार्यान्वयन मा एकीकृत जो पछि छ। यो भाग डाटा को रसिद समयमा कि विशेषता छ एक सेकेन्डमा 100 भन्दा बढी tysyach डाटा ब्लक को एक चयन छ। त्यसपछि, यी डाटा जो एक उच्च स्तर संयन्त्र प्रयोग गरेर आउँछ विश्लेषण, प्रयोग गरिन्छ।
अर्को स्तर सिस्टम, conversely, सबै डिटेक्टर प्रवाह जानकारी प्राप्त। सफ्टवेयर डिटेक्टर नेटवर्क मा संचालित। 10 माइक्रोसेकेन्ड - त्यहाँ पछि डाटा ब्लक, को ब्लक बीच औसत समय प्रशोधन गर्न कम्प्युटर को एक ठूलो संख्या प्रयोग गर्नेछ। कार्यक्रममा मूल बिन्दु अनुरूप, कणहरु को एक चिन्ह सिर्जना गर्न आवश्यक छ। परिणाम एक घटना समयमा खडा गर्ने गति, ऊर्जा, र अन्य बाटो मिलेर गठन डाटा सेट छ।
सबै त्वरक5मुख्य भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
1) इलेक्ट्रॉन-पोजीट्रान त्वरक collider। भाग superconducting गुण संग7tysyach चुम्बक छ। तिनीहरूलाई संग टनेल बीम को कुंडलाकार निर्देशन मार्फत हुन्छ। र पनि तिनीहरू एक प्रवाह जसको चौडाइ एक बाल को चौडाई गर्न घट्छ मा एक बीम ध्यान।
2) संकुचित muon Solenoid। यो डिटेक्टर सामान्य प्रयोजन को लागि डिजाइन गरिएको छ। यस्तो डिटेक्टर मा, उदाहरणका लागि Higgs कण खोजी, नयाँ घटना को लागि खोज र छन्।
3) वेक्षक LHCb। antiquarks - यो उपकरण महत्त्व quarks र तिनीहरूलाई विरोध कणहरु खोजी गर्न छ।
4) toroidal स्थापना एटलस। यो डिटेक्टर को muons को fixation लागि डिजाइन गरिएको छ।
5) एलिस। यो डिटेक्टर नेतृत्व आयनों र प्रोटन-प्रोटोन टक्कर टकराने कब्जा।
कठिनाइहरु LHC सुरु
उच्च प्रविधिको उपस्थिति समाप्त भन्ने तथ्यलाई बावजुद अभ्यास सबै त्रुटिहरू को संभावना फरक छ। एक ढिलाइ, साथै त्वरक विधानसभा को विफलता समयमा। म यो अनपेक्षित अवस्था थिएन भन्न पर्छ। उपकरण धेरै nuances समावेश गर्दछ र यस्तो सटीक वैज्ञानिकहरू यस्तै परिणाम आशा आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, सुरूवात बेला वैज्ञानिकहरू सामना कि समस्या को एक - तुरुन्तै ठक्कर अघि प्रोटन को बीम केन्द्रित जो चुम्बक, को इन्कार। यो गम्भीर दुर्घटना कारण superconducting चुम्बक को हानि गर्न माउन्ट विनाश कारण थियो।
यो समस्या 2007 मा खडा। यो, को collider को सुरूवात धेरै पटक सौतेली, र जुन मा शुरू भयो किनभने, लगभग एक वर्ष Collider अहिलेसम्म सुरु।
को collider अन्तिम लन्च सफल भयो, यो डाटा को धेरै टेराबाइट्स बटोरता।
सुरूवात जो अप्रिल 5, 2015 मा भयो Hadron Collider, सफलतापूर्वक संचालित। समयमा महिनाको बीम को घन्टी वरिपरि Chase हुनेछ, बिस्तारै बढ्दै शक्ति। जस्तै अध्ययन लागि उद्देश्य, कुनै। ठक्कर ऊर्जा बीम वृद्धि गरिनेछ। देखि713 TeV TeV लिफ्ट को मूल्य। यो वृद्धि कणहरु को टकराव नयाँ अवसर हेर्न अनुमति दिन्छ।
2013 र 2014 मा। सुरुङको, गतिवर्धकपरिवर्तनगरियो, डिटेक्टरों र अन्य उपकरण को गम्भीर प्राविधिक निरीक्षण थिए। परिणाम 18 द्विध्रुवी चुम्बक समारोह superconducting छन् थियो। तिनीहरूलाई को कुल संख्या 1232 टुक्रा हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, बाँकी चुम्बक unnoticed गएको छैन। अन्यथा हामीले ठंडा विरुद्ध सुरक्षा को प्रणाली प्रतिस्थापन, सुधार राखे। पनि चुम्बक को ठंडा सिस्टम सुधार भएको छ। यो तिनीहरूलाई अधिकतम शक्ति, कम तापमान मा रहन अनुमति दिन्छ।
सबै राम्रो जान्छ भने, त्वरक को अर्को सुरूवात मात्र तीन वर्ष पछि हुनेछ। यो अवधिमा मार्फत collider को प्राविधिक परीक्षा सुधार गर्न, योजना काम निर्धारित।
यो मरम्मत लागत विचार बिना एक मुद्रा लागत कि उल्लेख गर्नुपर्छ। Hadron Collider, 2010 को रूपमा गर्न 7.5 bln। यूरो बराबर एक मान छ। यो आंकडा विज्ञान को इतिहास मा सबै भन्दा महंगा परियोजनाहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा सम्पूर्ण परियोजना प्रर्दशन गर्दछ।
सुरूवात जो को ब्रेक पछि भयो Hadron Collider, सफल भयो। रोचक डाटा संकलन गरेका थिए। उदाहरणका लागि, प्रमाण सही कणहरु को आधुनिक विचार भनेर प्रस्तुत गरियो। यो सीएमएस र LHCb डिटेक्टरों को उचित सञ्चालन गर्न सम्भव धन्यवाद बनेको छ। यी डिटेक्टरों क्षय बी प्रत्यक्ष प्रमाण निष्ठा आधुनिक सिद्धान्त छ दुई Mesón, समातिएको।
यो सिद्धान्त को प्रमाण छ कसरी प्रश्न सोध्ने लायक छ। एउटा तरिका - यो नयाँ कण को कब्जा छ। एक टकराव जो आधुनिक सिद्धान्त समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो नयाँ प्राथमिक कण हुनेछ, यदि त्यो छ।
वैज्ञानिकहरूले कण मा ध्यान केन्द्रित किनभने यो देखाउन सक्छौं, वा कम से कम supersymmetry को दिशा मा ढोका खोल्न। यो जेनेभा मा वैज्ञानिक अनुसन्धान लागि केन्द्रमा थप अध्ययन र कामको लागि राम्रो सुरुवात हो।
को collider को अर्को आधुनिकीकरण हुन जाँदै पछि कणहरु थप अध्ययन tasked गरिनेछ। विशेष, यो Higgs boson बारेमा थप जान्न आवश्यक हुनेछ। यो खोज नोबेल पुरस्कार, यसको गुण को सबै सम्मानित गरियो लागि पूर्णतया बुझे र सिद्ध भन्ने तथ्यलाई बावजुद। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले यस अचम्मको कणहरु को अध्ययन मा एक लामो र कठिन काम छ।
साथै, तपाईंले प्रमाणित वा supersymmetry को सिद्धान्त खण्डन गर्नु काम जारी हुनुपर्छ। यो एक बिट शानदार देखिन्छ हुनत, तर यो अवस्थित एक सही छ। सबै ध्यान मात्र प्रत्येक परियोजनाको लागि महत्त्व पहिलो मुद्दा दिइएको छ विचार छैन यो क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूको यसको आफ्नै टोली छ।
निस्सन्देह, यो छैन कि वैज्ञानिकहरू गर्न सम्बोधन गर्न आवश्यक सबै कार्यहरू छ। जानकारी को प्रत्येक नयाँ terabyte संग प्रश्न निरन्तर पूरक सूची प्राप्त, र आफ्नो उत्तर वर्षौंदेखि अप देख्यो गर्न सकिन्छ।
रेटिना: समारोह र संरचना। रेटिना आँखा समारोह
मानव भ्रूण विकास
वैज्ञानिक गतिविधि। वैज्ञानिक गतिविधिहरु को विकास
, ब्रह्माण्डको को वैज्ञानिकहरू द्वारा अध्ययन कसरी महत्त्वपूर्ण छ तपाईं के लाग्छ?
एक कुक को लागि आटा, या सबै केहि जटिल - बस
क्याथरीन 2. फोटो र मूल्य को सुन, चाँदी र तामा सिक्का
कसरी आफैलाई एक स्मारक स्थापना गर्न - ग्रेनाइट वा संगमरमर
"पुरानो स्पाइस" - दुर्गन्ध मानिसहरू लागि: समीक्षा। मानिसहरू पसिना लागि शीर्ष ठोस deodorants
कारणहरू, लक्षण र उपचार: महिनावारी अघि Thrush
कसरी आफ्नै मनके कंगन बनाउन
रक्त समूह मा वजन लागि उपयुक्त छ
पीसी मा संसारमा सबै भन्दा राम्रो खेल। निःशुल्क कम्प्यूटर खेल: र्याङ्किङ्ग
यस बालिका कसरी मज्जा गर्न केही सरल रहस्य